Ikhukhamba | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Izinhlobo zama-fertilizer umanyolo: uhlelo lokusebenza kanye nezakhiwo
Umquba we-Potash wuhlobo lwamaminerali amaminerali aklanyelwe ukugcwalisa isidingo sezitshalo ze-potassium. Njengomthetho, zihanjiswe ngesimo samanxube anesisindo samanzi, ngezinye izikhathi ngokufakwa kwamanye ama-compounds ane-potassium ezinhlotsheni ezivumela isitshalo ukuba siyidle. Inani lamakhomikhali e-potash Inani lenamakhomikhali e-potash linqunywa ukubaluleka kwe-potassium ngokudla okunamaminerali kwezitshalo.
Ikhukhamba ezihlukahlukene "Herman"
Ummeli womndeni wekhukhamba we-pumpkin unomlando omude kakhulu. Yaqala ukukhula eminyakeni engaba ngu-6000 edlule. Indawo yakhona yemifino, isayensi isithelo, ibhekwa njengeNdiya. Kodwa, naphezu kwalokhu, indawo yokulima nokuxhaphazwa kwalesi mkhiqizo iningi kakhulu. Ngisho nasezikhathini zasendulo, abantu base-Afrika, iGrisi, uMbuso WaseRoma bazinikela kulo mifino, ogama lakhe lavela kulesiGreki elithi "aguros", okusho ukuthi "okungavuthiwe nokuvuthiwe."
Momordica: ukusetshenziswa, izakhiwo zokwelapha kanye nokuphikisana
I-Momordica, noma njengoba ibizwa nangokuthi i-pomegranate yaseNdiya, umunyu omunyu, ikhukhamba eliyingozi okanye yamaNdiya, ikhabe yamaShayina, ungumvini ohlaza owenziwe umndeni. Indawo yakuleli sitshalo yiNdiya neChina. Kunezinhlobo zezitshalo ezilodwa futhi ezimilayo. Kuphelele, kunezinhlobo ezingu-20 ze-momordica.
Indlela yokukhipha izinambuzane ngamakhukhamba
Unyaka ngamunye, abalimi nabalimi bakhononda ikhukhamba izinambuzane, zombili ezinciphisa ukuphepha kwesitshalo futhi zichithe ngokuphelele. Ngokuvamile, i-parasite iyakwazi ukulimaza okwanele ngaphambi kokuba iqaphele futhi izoqala ukubola. Kubalulekile ukusabela ngesikhathi esifanele ezinambuzane ezihlukahlukene, izimbungulu nezimpungushe, okungenakukubona ukuthi zingalimaza kakhulu isivuno noma ukuthelela isitshalo ngezifo.
Indlela yokuthola isivuno esihle samakhukhamba, ukulima ngokusebenzisa i-hydroponics
Ikhukhamba evamile - umuthi wonyaka wekhaya lomkhumbi. Kubonakala emasikweni eminyakeni engu-6 000 eyedlule, iNdiya ibhekwa njengendawo yokuhlala kuyo. Emapulazini enamuhla yemifino, kunezindlela eziningana zokukhulisa ukhukhamba: kumathinteritri, emiphongolweni, ngaphansi kwefilimu, ezikhwameni kanye nezikhwama, futhi usebenzisa i-hydroponics, manje ejwayelekile kakhulu.
Kunezinhlobonhlobo zekhukhamba ezakhiwe, ezihlukile ngokuvuthwa, ukuma, ubukhulu, umbala, izinga lokukhiqiza, ukumelana nezinambuzane nezifo. Ezindaweni zasemadolobheni nasezindadi zemifino ikakhulukazi ukhukhamba okhulile oval, cylindrical. Kodwa-ke, bambalwa bayazi ukuthi kunezinhlobonhlobo zokukhukhamba, izithelo zazo ezingababili nxazonke.
Indlela yokuvikela ukhukhamba kusuka kuma-aphid, izindlela zokubhekana nezinambuzane zasegadini
Ngokungangabazeki, i-aphid ibhekwa njengenye yezinambuzane eziyingozi kakhulu nezivamile. Eziningi zezinhlobo zawo zingatholakala engxenyeni evulekile engadini kanye neyadini. Ikakhulukazi ama-aphid afana nokutshala ukhukhamba nama-melon. Ngokuvamile kukhona i-aphid yamakhukhamba kubamba lokushisa, naphezu kwezinyathelo zokuvikela. Ukuze ususe izinambuzane, udinga ukwazi ukubhubhisa ama-aphid ngaphandle kokulimaza kwezitshalo.
Ngidinga ukubhekana nezimbali ezingenalutho kumakhukhamba
Ukulima kwamakhukhamba kuhilela ukuhlinzekwa kwemifino yokushisa, ukukhanya nokuswakama. Kodwa indlela ecasulayo ngayo lapho kungekho ukuvuna nhlobo. Kunezimbali eziningi kunokhula, kepha ziphuma zingenalutho. Futhi kwenzeka ngenxa yezinto ezimbi ezincane zembewu kanye namaphutha kwezobuchwepheshe bezolimo. Ake sizame ukuthola ukuthi yini okufanele yenze uma kunezimbali eziningi ezingenalutho kumakhukhamba, futhi sizohlaziya ngokuningiliziwe ngezizathu zokubukeka kwazo.
Ukukhethwa kwembewu engcono kakhulu yokutshala ezweni
Sonke sijwayele imifino elula futhi engabizi njengekhukhamba. Ukhukhamba yizivakashi ezihlala njalo etafuleni lethu unyaka wonke: ezinhlobonhlobo ehlobo, ebusika njengama-pickle. Futhi akuvamile ukuhlangana nomlimi onjalo, ongadini engayitholi le yemifino. Kungabonakala, yini okungaba lula ikhukhamba? Kodwa zihlukile: ngesimo, ubukhulu, umbala, ekugcineni, ukunambitha.
Ikhukhamba Ukukhiqiza Ubuchwepheshe
Ukhukhamba ube yinye yemifino esemqoka ehlanganisa nokudla kwansuku zonke izakhamuzi zakithi. Kanye namazambane kanye utamatisi, zikhulile cishe yonke ingadi yemifino. Lesi sihloko sizoxoxa nge-Finger, incazelo yamakhukhamba alezi zihlukahlukene, izici zokunakekelwa kwezitshalo nokutshala. Incazelo yokuhlukahluka Lezi zinhlobonhlobo zakhiwe ngumfuyi waseRussia uShefatov V.
Izimfihlo zokuvuna okucebile: kanjani ukukhula pepper kanye utamatisi ndawonye? Ungathola kanjani izithombo ezinhle?
Isu lokudla izinkukhu ze-broiler ezinama-antibiotics namavithamini
Phatha ingadi yezithelo ze-curly hair
Izinhlobo ezikhunjulwayo zezinkukhu ezinezithombe nezincazelo
Umnsalo wokuhlobisa - ukutshala nokunakekela emhlabathini ovulekile
Konke mayelana nezinhlobo zakuqala zeklabishi: kusuka egameni lokuvuna
Indlela yokutshala nokukhula ikhukhamba "umlimi waseChina"
Izihlahla eziyi-15 eziqhakazile nezihlahla zokunikeza